Nokuba dibanisa okanye thabatha – wonke umfazi ingaba i-uluvo lwakhe malunga yakhe Breasts. Ukuba usebenzisa uhlobo abafazi abo njenge zabo Breasts, ngoko uyakwazi ukuqwalasela ngokwakho lucky, ngenxa enkulu indawo ekuyo into (ipesenti) wenze into engalunganga nge zabo breast. Kule nkqubo, Breasts ngabo, akukho mcimbi yintoni ubungakanani, inyaniso nimangaliswe of nature. Cofa apha ukufunda exciting iinyaniso malunga ibhinqa breast.”Bucala ukusuka humans, hayi ezinye Primate sele Breasts ngokusisigxina,”ubhala Evolutionary ingcali, Carole Jähem kwi -“Ngokuzalwa Kwimeko non-oluntu primates (nezinye mammals) epheleleyo breast yindlela ecacileyo uphawu ukuba ibhinqa ngu breastfeeding. Hayi ke kunye nabantu.”Kutheni ke ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, hayi zicacisiwe. A inkumbulo icinga ukuba oluntu Breasts kuba ngokuziphinda-phinda ixabiso kuthetha kwi-umbhalo ongenanto: kufuneka stimulate. Ngokunxulumene Guinness book of ihlabathi iimbali Annie Hawkins-Turner sele oyena yendalo Breasts ehlabathini. Yena sele a axis powers circumference ka-cm. Yakho Bras ufuna ukuthenga kubo ngendlela ubungakanani ZZZ. Abafazi unako ukuza ngapha Stimulation wakhe amaza amancinane amanzi ukuba i climax – lento scientifically proven. Kwi-nzulu le magazine”Umntu ke Impilo”, wathi pesenti abafazi udliwano-ndlebe, ukuba kokuba i -“breast ufikelelo kwincam yoluvo yesondo”. Umama u-ubisi yi”ugqibelele ukutya”kuba babies. I-world health umbutho (ABO) utshilo. Oku ngenxa yokuba ubisi iqulathe antibodies ukuba ukukhusela umntwana ngokuchasene nangazo kunye nezifo.
Umfanekiso Igalari, Zisixhenxe amanyathelo spectacular Ngesondo lake Mifanekiso surprising yokubhalwa iinyaniso malunga Breasts Ezisixhenxe amanyathelo spectacular Ngesondo. Kuba Breastfeeding, ayithethi ukuba Indima, nokuba ngunina sele encinane okanye enkulu Breasts. Xa kukho rhoqo abafazi kunye encinci Indebe ubungakanani, uloyiko ukuba uphelelwe ingabi nako breast-kudla abantwana babo, kubalulekile enyanisweni, abasetyhini kunye enkulu Breasts abathe ubunzima kunye Breastfeeding. Ingaba dissatisfied kunye sakho Indebe ubungakanani.
Ulinde wena kancinci
I-Breasts ezininzi abafazi ukukhula nkqu emva Teenage eminyaka. Kanjalo ngexesha ngesondo arousal, umfazi ke Breasts unako ukukhula ngokunxulumene ingcaphephe ukuba ipesenti. Kubalulekile ngokupheleleyo eqhelekileyo ukuba abafazi kuba ezimbini ezahlukeneyo sized Breasts. Ngepesenti bonke abafazi, ekhohlo breast yeyona ndlela makhulu kunokuba kunjalo, ubhala umbhali, Corlie Picot. Kutheni lento ngoko ke, researchers baba ayikwazi ukucacisa. Pinots inkumbulo kukuba abafazi abaninzi breast-lesondlo neqabane lakho ekhohlo breast, ukuze ube unelungelo Isandla free. Oku wenza umzimba ukuvelisa ngakumbi ubisi kuba ekhohlo breast. Ingaba ukholelwa ukuba kukho kuphela nipple-bumba. Ngoko elandelayo kuyo ingaba view-size.”Okuqhelekileyo”amaza amancinane amanzi protrude a Mm ukususela warts atrial ngaphandle kwi-yingqele kwaye ngesondo arousal. Cambalala amaza amancinane amanzi protrude kuphela xa kuthe yingqele okanye xa stimulated.”Puffy”amaza amancinane amanzi kuba wavusa areola,”eguquliweyo”amaza amancinane amanzi ingaba yathi yayalela ngaphakathi. Eyona amanqaku kwaye Hetalia ukufumana izithuba yonke imihla nge-imeyili. I-Kwincwadana zingabandakanya personalized Isiqulatho kunye izibhengezo.
Zinokuphathwa ividiyo dating ukuncokola nge-girls →